China Quality okpomọkụ ihe mmetụta, okpomọkụ mmetụta USB, Stator okpomọkụ mmetụta, Iburu okpomọkụ mmetụta Manufacturer, kwuru - Testeck Co., Ltd
okpomọkụ ihe mmetụta na-eji na-agbanwe agbanwe nke ndị na-eguzogide mgbe ihe onwunwe okpomọkụ na ala tụọ okpomọkụ. ihe mmetụta ihu igwe na-ejikarị na mmanụ ala, kemịkalụ, igwe, nkà mmụta banyere ọkụ, ike eletriki, akwa, nri na ngalaba ụlọ ọrụ ndị ọzọ na teknụzụ sayensị.
Nabata ịkpọtụrụ testeck, testeck na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ mmetụta okpomọkụ maka afọ 17. anyị nwere ike ahaziri gị chọrọ.
1. A na-eji ihe mmetụta okpomọkụ ihe omimi maka akụkụ dị iche iche nke akụkụ dị iche iche nke hydro-generators (dị ka nduzi elu nke na-ebu ohia, ntanye aka, obere nduzi na-ebu ohia, ndu mmiri na-amị ala, oyi / ikuku na-ekpo ọkụ, mmiri, pipeline mmanụ, mmesho okpomọkụ nke stator. ).
2. Anyị nwere ike ịhazi aha ndị ahịa chọrọ, jiri usoro dị iche iche nwere ezi uche karịa oge dị iche iche, na iji mkpirisi dị elu. A na-eji teknụzụ laserwelding eme ihe iji gbochie nkwonkwo ọkụ ahụ ka ọ ghara ịtọpụ ma ọ bụrụ na ọ dị n'okpuru oge ike, nke na-eme ka mmụba ahụ dịkwuo mma.
1. transgbọ okporo ígwè na-agagharị agagharị gụnyere njikọ nke ike eletrik, eriri njikwa na usoro EMU ndị metụtara ya. A na-eji eriri igwe eletrik-a na-eji eriri na nlekota nke akụrụngwa eletriki, ngwaọrụ eletriki, locomotives, ụgbọ ala na mpaghara ndị ọzọ dịka ụgbọelu, ikuku, ngwa agha, ụgbọ mmiri, wdg, kwesịrị ekwesị maka gburugburu gburugburu.
2. Wide okpomọkụ nso, magburu onwe chemical eguzogide, mmetụta na-eguzogide, elu kwes ndụ, nuklia radiationresistance, elu eyi ndị na-eguzogide, Ìhè arọ, obere size, ìhè arọ, highsoftness, Ọ bụrụ na nke a ọkụ, ọ nwere ike belata nsogbu ka ndị mmadụ ma melite nchekwa nke njem. Maka eriri ndị nwere ma ọ bụ na-enweghị ọkpụkpọ, a na-eji ihe ndị na-enweghị halogen na-ekpuchi mkpuchi na n'ọbọ. N'ihe banyere ọkụ, ngwaahịa a nwere ike belata mgbasa nke ire ọkụ, belata nsị nke gas na anwụrụ ọkụ, belata nhụpụ anya, ma mee ka ndị mmadụ nwee ike ịhapụ ngwa ngwa.
Testeck Co., Ltd tumadi na usoro nlekota ọkụ, eriri pụrụ iche na mpaghara ndị ọzọ iji mee nyocha na mmepe miri emi. Kemgbe ntọala ya na Shenzhen na 2003, anyị na-enye ndị ahịa ọtụtụ ngwaahịa zuru ezu, nke a na-ejikarị eme ihe na ndị nrụpụta nnabata na nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri. Dị ka: Dongfang Electric, Shanghai Electric, Harbin Electric, Tianjin GE, Voit, Three Gorges Group, Huadian Group, Huaneng Group, Guodian Group, Datang Group, State Grid, China Southern Power Grid, Gezhouba Hydropower ọdụ na na. Testeck na-ekwusi ike na nguzogide okpomọkụ nke ndị ahịa na-eji eme ihe kwesịrị ntụkwasị obi ma zie ezi. N'ihi na ihe karịrị afọ iri, ụlọ ọrụ ka nọgidere nyekwara ego na nnyocha na mmepe, imewe, ngwa na ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke moto okpomọkụ ihe mmetụta, na-enweta ọtụtụ ịrịba oru rụzuru. Karịsịa, ọrụ nyocha nke sayensị nke "Nhazi Nhazi Nhazi na Ngwa nke nnukwu Generator otu ihe mmetụta okpomọkụ" na-eji ihe eji emepụta ihe eji emepụta ihe dị iche iche iji mezie ụdị dị iche iche nke mkpuchi ahụ, ma nakweere ihe ọkụkụ dị elu na nrụgide dị elu nke teknụzụ maka otu oge. ịkpụzi.
You maara nkọwa na ụdị nke eriri pụrụ iche?
Ngwongwo na eriri puru iche bu uzo nke ihe omuma nwere ihe puru iche na ihe puru iche, nke ha na ndi ozo na eriri ndi nwere otutu buru ibu na uzo di iche iche.
Popularize okpomọkụ sensọ
Onye na-ebugharị okpomọkụ na-ezo aka na ihe mmetụta nke nwere ike ịchọpụta ọnọdụ okpomọkụ ma gbanwee ya na akara ngosipụta eji arụ ọrụ. Okpomọkụ mmetụta bụ isi akụkụ nke okpomọkụ e ji atụ ngwá, na e nwere ọtụtụ iche.
Ogwe osisi nke ọdụ ụgbọ mmiri hydropower
A na-etinye eriri nke ihe mmetụta na ọdụ mmanụ na pre-alaka nke ọkpọkọ corrugated.
Adreesị: Building 3, Security ọgụgụ isi Industrial Park, Nke 171 gongchang Road, Guangming New District, Shenzhen obodo, Guangdong Province
Ozi E-mail: lixiangchao@testeck.com
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa. Anyị nwere okpomọkụ ihe mmetụta, Okpomọkụ mmetụta USB, Stator okpomọkụ ihe mmetụta, Iburu okpomọkụ mmetụta na OA. The price nke okpomọkụ mmetụta, okpomọkụ mmetụta USB, Stator okpomọkụ mmetụta, Iburu okpomọkụ mmetụta bụ kasị ala ma na ezi mma.
Copyright 2020-2021 Testeck Co., Ltd 粤ICP备12049720
Njikọ Sitemap RSS XML